ကလေးများအတွက် functional dyspepsia (ရင်) -
ကလေးများအတွက် functional dyspepsia - အကြောင်းရင်းများ, အမျိုးအစားများနှင့်မမှန်စားသုံးခြင်း၏ကုသမှု
ကလေးငယ်များအတွက် functional dyspepsia မှန်မှန်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကိုအထက်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာအီကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်ကလေးဆငျးရဲဒုက်ခအများကြီးကယ်တင်တတ်၏။ ရောဂါသိသိသာသာသူငယ်၏အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုချို့ယွင်းသကဲ့သို့, မိဘများတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
functional dyspepsia - ကလေးမြားအတှကျကဘာလဲ?
ဤရောဂါတခုအော်ဂဲနစ်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ dyspepsia ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း၏ပြတ်တောက်၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ပြဿနာဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ကလေးများအတွက် functional dyspepsia ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ခန္ဓာဗေဒကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဇီဝဖြစ်စဉ်အခြေအနေမှကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရင် - အကြောင်းရင်းများ
ကလေးများအတွက် Dyspepsia, များသောအားဖြင့်အထက်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း၏မော်တာ function ကို၏ neurohumoral စည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အချို့လူနာများတွင်ပြဿနာ visceral hypersensitivity တစ်နောက်ခံပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာရောဂါမဆိုအဆင့်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် - ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လမ်းကြောင်း, အဲဒီ receptor ယန္တရားအူ, enteroendocrine ဆဲလ် - နီးပါးအမြဲလက်အောက်ခံအဆိုပါ dyskinesias အလောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
disorders ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်လာ။ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်လျှင်မြန်စွာအလုံအလောက်ကြေညက်ကြသောအခါမွေးကင်းစနှင့်အထက်အတွက်ကစော်ဖောက်ခြင်း dyspepsia တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသတဲ့အခွအေနေလည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဆရာဝန်သေးဖြေဆိုနိုင်ကြသည်မဟုတ်။ ဒါဟာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့် roughage ၏အလွန်အကျွံစားသုံးမှုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်သာလူသိများသည်။
ကလေးတွေအတွက်ကစော်ဖောက်ခြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ dyspepsia နှင့်ကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွား:
သကြားလုံး (သင်အပူမှာသူတို့ကိုအစာစား, အထူးသဖြင့်လျှင်) ။
ရောဂါ၏ဤမျိုးကိုလည်းဆေးဟုခေါ်သည်။ ရောဂါ၏ဤကြင်နာတဲ့ပရိုတိန်းအစားအစာသို့မဟုတ်အစာခြေအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၏ enzymatic ချို့တဲ့၏အလွဲသုံးစားမှုများတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သားသမီးအတွက် dyspepsia ၏ syndrome ရောဂါအစာအိမ်တွေဟာအစာကြေဖို့ခက်ခဲပြီးအရာအသားသို့မဟုတ်အသားထုတ်ကုန်များဖက်တီးအမျိုးအစားများ၏စားသုံးမှုပြီးနောက်ရောဂါ။ ရလဒ်အနေနဲ့အစာအာဟာရကိုအူများနှင့်အဆိပ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအတွက်ကားပုပ်ပျက်တတ်မှစတင်ခဲ့သည်။
ကလေးများအတွက် functional dyspepsia အဆီကြောင့်မြင့်မားသောအရည်ပျော်အဆီမြင့်မားသောအကြောင်းအရာနှင့်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းမှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောထိုထုတ်ကုန်၏အခြေခံပေါ်မှာကိုပြင်ဆင်ဝက်သားနှင့် mutton ဆီဥနှင့်ဟင်းလျာများပါဝင်သည်။ မွေးကင်းစပေါများဝမ်းလျှောထိုသို့သောအလုပ်လုပ်တဲ့ dyspepsia ဖြင့်လိုက်ပါသွား။ ထွန်းတောက်သောရဲရင့်ရူပနှင့်အတူ Cal ။
ကလေးများအတွက် dyspepsia ၏လက္ခဏာများ
ကလေးများအတွက် dyspepsia ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအသိအမှတ်ပြုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သောပြဿနာအားဖြင့်ထင်ရှား:
(8 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အထိ) မကြာခဏထိုင်ခုံလုပ်ဖို့;
အူလမ်းကြောင်း colic ။
ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်သောတချို့ကလေးတွေရောဂါ၏နောက်ခံပေါ်တွင်ဖွံ့ဖြိုး: thrush, နှီးအဖု, stomatitis ။ dyspepsia ၏ရိုးရှင်းသောပုံစံ 2-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဖြတ်သန်းပေမယ့်အားပျော့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကလေးတွေထဲမှာတစ်ခါတစ်ရံထိုကဲ့သို့မြေပေါ်တွင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့, အဆိပ်အတောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသည်:
(20 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အထိ) အလွန်မကြာခဏကြဲကြဲထိုင်ခုံလုပ်ဖို့;
ကလေးများအတွက် functional dyspepsia - ကုသမှု
ကစော်ဖောက်ခြင်း dyspepsia ကလေးသို့မဟုတ်ရောဂါမဆိုအခြားပုံစံကုသမီ, ကပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကုထုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖို့, တကသင်တန်းကိုလိုက်သင့်ပါတယ်။ ကလေးများအတွက် dyspepsia ၏ကုသမှုမသာကပါဝင်ပတ်သက်ဆေးဝါး, ဒါပေမယ့်လည်းတင်းကျပ်သောအစားအစာကိုယူပြီး။ ဤသည်ဖွယ်ရှိအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ restore နှင့်ပြဿနာများ၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီးပါလိမ့်မယ်။
ကလေးများအတွက် functional dyspepsia - လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များ
အချိန်မီအစပျိုးကုထုံးတစ်ခုအဆင်သင့်ခန့်မှန်းချက်ရှိပါတယ်။ မွေးကင်းစကုသမှု Uncomplicated dyspepsia ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကပါဝင်ပတ်သက်:
Domperidone ။ ဆေးဝါး, prokinetic အကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်ကွက်အောက်ပိုင်း esophageal sphincter ၏သေံတိုးပွါး, ကလျှင်မြန်စွာထိမှန်ခံရပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူသည်။
Buscopan ။ လုပ်ကွက်က M-cholinergic receptors နှင့် ganglioblokiruyuschim အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, အားဖြင့်ထိရောက်စွာနာကျင်မှုရောဂါဖမ်းနိုင်ပါတယ်။
Rutatsid ။ အဆိုပါအစာအိမ် mucosa ကာကွယ်ပါ, သည်းခြေအက်ဆစ်အပေါ်တစ်ဦးစည်းနှောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု pepsin ၏ proteolytic လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။
Pirenzepine ။ Antisecretory မူးယစ်ဆေး။ အဆိုပါချွဲအမြှေးပါးအတွင်း microcirculation တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် intragastric proteolysis ဖိနှိပ်။
dyspepsia ရောဂါပျောက်ကင်း၏အဆိပ်ပုံစံတစ်ခုသာဆေးရုံအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကလေးသည်ရေနှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်အစားအသောက်များတွင်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ, အရည်သွေးကြောသွင်းခန္ဓာကိုယ်သို့မိတ်ဆက်သည်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဆေးထိုးမှုနှုန်း - ဂလူးကို့စဖြေရှင်းချက်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်ဖုန်းမြည်သံရဲ့။ သူငယ်၏ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကုသမှုပြီးနောက်အပတ်ကနို့ဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုနို့ရောနှောတိုက်ကျွေးရပါမည်။
ကလေးများအတွက် dyspepsia များအတွက်အစားအသောက်
အစားအသောက်များတွင်ရောဂါ၏အမျိုးအစားနှင့်ပုံစံပေါ်တွင် မူတည်. ရွေးကောက်တော်မူသော်လည်း, အားလုံးနီးပါးလူနာတွေကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်းအချို့ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မကြာခဏ dyspepsia နှင့်ဒဿမကိန်းဖို့လိုအပ်သည့်အခါစားပါ။ ကလေးများအတွက် acute ရင်တစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာညစာဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးဟင်းလျာများ၏မသင်မနေရလက်ခံမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အစားအသောက်များတွင်ကနေအားလုံးအတုအစားအသောက်ထို့အပြင်အရောင်ကြာရှည်ခံဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြုသည်။ အလုပ်အစားအစာနွေးဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာပေါင်း, အနာစိမ်းဒါမှမဟုတ်စွပ်ပြုတ်ပြုတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့ dyspepsia ၌မကျရမည်နိုင်သည်
ဘယ်အချိန်မှာ putrefactive dyspepsia ပရိုတိန်းပမာဏပါဝင်သောအစားအစာများကိုမစားဘဲနေလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအစားမီနူးတဖြည်းဖြည်းပါဝင်သည်သငျ့သညျ:
ကာကွယ်ဆေးထိုး - ပိုလီယို
အဘယ်ကြောင့်ထိုသူငယ် tiptoes အပေါ်သွားလာ?
သားသမီးတို့အဘို့ paracetamol ၏နေ့စဉ်ထိုး
Espumizan ကလေး - လျှောက်လွှာ၏အရေးကြီးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
Brucellosis - လက္ခဏာများ
သင့်ကလေးတစ်ဦး enema အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Zara - သစ်ကိုစုစည်း 2015
Crea Concept ကို
အခွားထိုးပြီးဦးထုပ် - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များဖန်တီးနည်း
အဆိုပါ sinuses ရောင်ခြင်း
Melania Trump $3သန်းဖမ်းဆီးရမိပြီးမှ, The Daily Mail ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆိုမှုအနိုင်ရ
လိင်အဘို့အ Capricorn အမျိုးသား